Polycarbonate | February 2020
Noocyada naqshadeynta ee lagu koriyo oo loo yaqaan "polycarbonate", "options exploring for purchase"
Beeralayda Polycarbonate waxay muddo dheer ka faa'iideysteen dadka degaanka ee xagaaga, rakibayaashu ma qaadato wakhti badan iyo dadaal, kharashkuna sidoo kale maaha mid weyn. Intaa waxaa dheer, suuqyadu waxay leeyihiin qaabab aad u ballaaran oo ah naqshadaha dhirta lagu koriyo, taas oo kuu ogolaanaysa inaad doorato ikhtiyaarka ugu habboon ee adiga kugu habboon. Iskujirida Keli Kombiyuutarka oo keliya oo ka samaysan polycarbonate oo miisaankiisu culus yahay, miisaankeedu ma adag yahay, in la rakibo, oo leh heer aad u sarreeya.
Guryaha Polycarbonate waxay muddo dheer u dhisteen tayadooda. Sababtoo ah dhismahoodu waa kala duwanaansho ee alaabooyinka ay ka kooban tahay, kharashka dhismaha iyo tayada. Si kastaba ha noqotee, ma fududa in la go'aamiyo asaaska aasaasiga ah ee loogu talagalay rakibidda geedo-dabka (polycarbonate). Sidaa darteed, waxaa haboon in la sahamiyo noocyada aasaasiga ah oo dooro midka kugu habboon.
Sidee loo hagaajiyaa polycarbonate on qaab bir ah
Arrinta ku dhejinta polycarbonate ee saldhigga birta ayaa ah dareenka kaliya ma aha dhismayaasha xirfadleyda ah, laakiin sidoo kale bannaanka caadiga ah, sababtoo ah waxay ka timaadaa waxyaabahan oo aad ka dhigi kartaa koronto qumman oo loogu talagalay dhirtaada. Dabcan, waxaad awoodi doontaa inaad hesho natiijo ku filan oo keliya haddii aad horay u sii ogtahay waxqabadyada lagama maarmaanka ah, laakiin taas ayaan kugu caawineynaa hadda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Polycarbonate 2020